के कारणले आउँछ मुखमा घाउ, के खाने ? – Ramailo Sandesh
के कारणले आउँछ मुखमा घाउ, के खाने ?
काठमाडौँ। मुखको घाउलाई मुखको अल्सर पनि भनिन्छ, जुन एक साधारण समस्या हो। जुन प्रायः सबै व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै समयमा सताउने गर्छ। यो गालाभित्रको छाला, जिब्रो र ओठमा आउने गर्छ। सामान्यतया यो घाउ सेतो वा रातो हुन्छ।
यो कुनै ठुलो समस्या होइन, तर यो धेरै पीडादायी हुन्छ। यसका कारणले खान पिउँन धेरै गाह्रो हुन्छ। समयमा यसको उपचार नगरे कहिलेकाँही यो क्यान्सरको कारण बन्छ। जब एक व्यक्तिले अधिक चिल्लो, पिरो वा पेटको खराबी वा कब्जियत हुन्छ, तब मुखको घाउ वा अल्सरको समस्या देखिने गर्छ।
मुखमा अल्सर आउने एक कारण पित्त दोष पनि हो। पित्त दोषलाई सन्तुलन गर्न मुखको घाउलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। लक्षणका आधारमा मुखको घाउ साना र ठुला दुई प्रकारका छन्, एपथस र फिभर ब्लिस्टर।
एपथस हुनुमा पेटको खराबी, पिरो चिल्लो खाने वा अन्य कारणहरूले गर्दा अल्सर हुने गर्दछ। फिभर ब्लिस्टर यो ओठ वरीपरि हर्पिज सिम्प्लेक्स भाइरसको कारणले हुने गर्दछ।
अधिकांशले मुखमा घाउ वा अल्सरको कारण पत्ता नलगाई घरेलु उपचार गर्न थाल्छन्। यस्तो गर्दा अझ जोखिम निम्तिने विशेषज्ञहरु बताउँछन्। उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिलाई पित्त दोष छ भनेपनि मुखमा घाउ आउने गर्छ । तर, मुखमा घाउ आएको कारण पत्ता नलगाई घरमा उपचार खोजियो भने यसले अझ धेरै जटिलता निम्त्याउँछ। यद्यपि, मुख अल्सरको अन्य कारणहरू पनि छन्।
मुखमा घाउ आएका बेला के गर्ने ?
– अत्याधिक मसला र पिरोजन्य खान्नेकुरा नखाने।
– चुइगम खाने बानिले पनि मुखमा अल्सर हुने गर्छ।
– भिटामिन–सीयुक्त खानेकुरा बढी खाने
– दुग्धजन्य पदार्थहरु खाने
– भिटामिन–बी युक्त खानेकुराको सेवन गर्ने
– खानाको साथ सलादको रूपमा काँचो प्याज खाने
– शरीरमा फोलिक एसिड, जिंकको अभावले पनि मुखमा घाउ हुन्छ
– दैनिक७ देखि ८ गिलास पानी पिउने
– यदि कब्जियतको समस्या छ भने, रेसादार सागसब्जी तथा फलफुलहरु खाने
– ग्रिन टि पिउने
– मुखको राम्रो सरसफाई तथा हेरचाहमा ध्यान दिने
– दाँतलाई सफा गर्न नरम बुरुसको प्रयोग गर्ने
तपाइको यस्ता खराब बानीले निम्त्याउँछ बुढ्यौली